दलाङ्गका दलित पिउने पानी नपाएर काकाकु’ल, आएको ५० लाख बाँडीचुँ’डी खाए अर्कैले । – Yuwa Aawaj
दलाङ्गका दलित पिउने पानी नपाएर काकाकु’ल, आएको ५० लाख बाँडीचुँ’डी खाए अर्कैले ।
बैसाख ४, २०७८ शनिबार 480
धादिङ्ग : यहाँको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. १ दलाङ्ग बस्ती, जहाँ दलितबाहेक अरु कुनै गैरदलितको वसोबास छैन । त्रिशुली नदीको टुप्पो राजमार्गबाट उत्तरतर्फ पर्ने दलाङ्गमा करिव १ सय घरधुरी दलितहरु मात्र रहेका छन् ।
त्यस बस्तीमा पिउने पानीको हाहाकार छ । एउटा तुरतरे धारो छ, त्यही पनि पुग्न १ घण्टा लाग्छ । तर पुगेर मात्र कहाँ हुन्छ र, घण्टाँै पालो कुर्नुको विकल्प छैन । कहिले उज्यालो होला र तुरतुरे धारोमा पानी थाप्न पाइएला अनि घर चाँडो गरी आइएला भन्ने पीर हरेक गृ’हिणीमा हुन्छ ।
किनभने बिहान अबेर पानीको धारोमा लाम बस्नुपरे दैनिकी ढिलाउने पक्का हुन्छ । अनि नानी-बावुलाई विद्यालय पठाउन पनि ढिला हुन्छ । हरेक राजनैतिक दलदेखि एनजिओ आइएनजिओको दलाङ्गका दलितलाई पिउने पानी दिने आसवासन पनि आउँछ । तर पिउने पानी त कहाँ हो कहाँ, आएको वजेट पनि बाँ’डीचुडी भाग लगाएर खान्छन् ।
राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी अनि उपभोक्ता समिति समेत मिलेर खान्छन् ।द’लाङ्ग खानेपानी उपभोक्ता समिति मनोज नेपालीको अध्यक्षतामा गठन पनि भएको छ । गठन भएको समितिलाई गल्छी गाउँपालिकाले ४० लाख र संसद कोषबाट १० लाख गरी ५० लाखको बजेट पनि विनोजित गरेको थियो ।
विनोजित वजेट तिनै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले नै झ्वाम पारेपछि खानेपानी आयोजना अन्योलमा परेको छ । सुख्खा याम लागेसँगै झन् दलाङ्गका दलित पिउने पानी समेत नपाएर काकाकुल बन्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिमा कति ब’जेट आएको, कहाँबाट आएको, स्थानिय सोझा–साझालाई केही पत्तो समेत छैन ।
तर समितिमा भएका टाठाबाठाहरुले नै रकम हिनामिना गरेपछि स्थानीय आ’क्रोशित भएका छन् । २ वर्षअघि गल्छी गाउँपालिकाले ४० लाख र संसद कोषबाट १० लाख गरी ५० लाख बजेट विनोजित भएको थियो । तर आयोजनाको काम सम्पन्न भएको भन्दै २ वर्षअघि नै रकम नि’काशा गरी बजेट फर्छौट भैसकेको छ ।
५० लाख बजेटले न त खानेपानीको मुहान पत्ता लगाउन सक्यो, न त खानेपानीको ट्यांकी नै बनाउन सक्यो । बन्यो त केवल समितिका पदाधिकारी अनि राजनैतिक दलका प्रतिनिधि अनि कर्मचारीको भुँडी ।
खानेपानीको आशमा दलाङ्गका दलि’तलाई झन् दलाई मात्र रहे राजनैतिक दलले । भोटमा दलाए, समितिले पानी आउने आशमा काममा दलाए । मुहान र ट्यांकीविनाको कालो प्लाष्टि’क पाइप २ वर्षपछि घरघरमा पु¥याए । २ वर्षअघि आएको बजेट कहाँ के भयो, पत्तो भएन स्थानियलाई । तर अख्ति’यारमा उ’जुरी परेपछि केही कालो पाइप र जिआइ पाइप अनि ट्रा’न्समिटर ल्याइएको छ ।
आएको पाईप पनि न त सदु’पयोग नै भयो, यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा रहेको छ । दलाङ्गका दलि’तबासीको लागि भनेर खानेपानीको हरेक वर्ष वजेट विनियोजित हुन्छ । समितिले काम भन्दा मागि खाने थलोको रुपमा लिदा खानेपानीको वर्षै देखीको समस्य झेल्दै आउनु परेको छ । समितिले खानेपानीमा आएको रकम काम नै नगरेपछि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको रकमबाट भए पनि स्थानियले पानी ट्यांकी मर्मत लगायतका कामहरु गर्दै आउनुपरेको छ
भनिन्छ- राजनैतिक परिवर्तनसँगै सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा पुग्याे, तर भ्रष्टा’चार पनि गाउँ-गाउँमै हुन थालेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय निकायमा भएको चरम भ्र’ष्टाचार नमुना गल्छी गाउँपालिका वडा नं. १ को दलित वस्तीमा रहेको दलाङ्ग खानेपानीलाई पनि लिन सकिन्छ ।
दलाङ्ग खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई आएको ५० लाख बजेट काम सम्पन्न भएको भन्दै फर्छोैट भएको २ वर्षमा केही पाईप देखाउनु नै च’रम ला’परवाही र भ्रष्टा’चारको नुमना हो ।
दलाङ्गका द’लितहरुको पी\_डामाथि भएको याे भ्रष्टाचारकाे उचिन छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयबाटै अावाज उठ्न थालेकाे छ ।
खानेपानीजस्तो मानव जीवनदेखि अन्य जनावरसम्मका लागि नभै नहुने अत्या’वश्यक वस्तुमा यसरी चरम भष्ट’चार गर्ने र पानीको नाममा मागिखाने बनाउनेहरुमाथि छा’नविन गरी सम्वन्धित निकायले आवश्यक का’र्वाही नगर्ने हो भने दलाङ्ग बासीका दलितको घाउ बल्झिरहनेछ । बेलैमा सम्वन्धित नि’कायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । -न्युज २४ नेपाल
Prevआगामी साउन १ गते देखि वृद्ध भत्ता बढाएर पाँच हजार पु’र्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा ।
Nextभिम रावल भन्नुहुन्छ : देशघा’ति एमसीसी रोक्नु प्रत्येक देशभक्त नागरिकको, कर्तव्य हो ।